Sida aad koobiga karaa iPod Music inay Lugood
> Resource > Lugood > Sida loo Copy iPod Music inay Lugood
Waxaan jeclaan lahaa in lagu wareejiyo ururinta music aan si Lugood saaxiibkay gabar ee. Waxay leedahay 200 oo heeso iyo waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro gabayadayda annagoo ka iPod in Lugood iyada. Tani waxay noqon kartaa wax fudud in aan iska fududaysto laakiinse anigu uma aan ka fikiri karaa hab loo sameeyo oo aan haba yaraatee la tirtiro ii ahaayeen heeso ama kuweed ah.
Mararka qaarkood, aad rabto in aad nuqul ka music iPod in Lugood sababo badan. Waxaa laga yaabaa, shilalka computer iyo aad u leeyihiin in ay dib nidaamka qalliinka computer. Nasiib wanaag, songs ayaa aad iPod, sida iPod xiriiri 5, sidaas aad doonayso in aad qabato music wareejinta. Waxaa laga yaabaa, inaad lumiso playlists Lugood kac ahayn, ama aad dib Lugood, si aad rabto in aad music u hagaagsan in Lugood. Waxaa laga yaabaa, in aad kaliya ku talo jiraan in ay dib u kor music in Lugood oo ay ku riyaaqaan.
Waxba ma ahan wixii dhibaato aad la kulanto, waan ku baryayaaye, waxa ugu muhiimsan ee aad ka welwelsan tahay waa inay u soo guuraan music iPod in Lugood. Dhab ahaantii, waxa si fudud loo wajihi karo ilaa iyo inta aad ka heli qalab kala iibsiga iPod in Lugood. Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) , (waayo Mac users) waa mid ka mid ah kugu habboon. Sidaa daraadeed, waxaad si deg deg ah u gudbiyaan karaa music iyo playlists in Lugood in Dufcaddii. Macluumaad music ayaa, sida ratings, play dacwadood oo dheeraad ah, la dhoofiyo doonaa in Lugood aad. Music ka sokow, waxay fududaysaa in aad si ay u gudbiyaan oo aanay videos, bandhigyada TV, Podcast, Lugood U iyo in ka badan.
Download barnaamijka on your computer in ay isku day ah oo bilaash ah!
Sida loo hagaagsan iPod Music inay Lugood Si fudud
Halkan, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo iPod wareejiyo cusub Lugood leh version Windows ah. Haddii aad isticmaasho Mac ah, waxaad kartaa in Lugood wareejiyo music iPod aad Mac sidoo.
Step1. Connect Your iPod si aad u computer
First of dhan, rakibi iyo bilowno iPod in Lugood kala iibsiga qalab on your computer. Markaas xiriiriyaan iPod si aad u computer la cable USB ah. Sida caadiga ah, taas qalab iPod in Lugood kala iibsiga si degdeg ah lagu ogaan doonaa in aad iPod ka dib iPod xiriiri xiran yahay. Markaas, aad iPod lagu soo bandhigi doonaa interface ugu muhiimsan sida shaashada waxay muujinaysaa:
Step2. Import iPod Music inay Lugood
Waa hagaag, meesha ugu hooseysa ee suuqa hoose, waxaad arki badhan - "iDevice Copy in Lugood". Waxaa Click. Markaas riix "Start". Iyadoo files warbaahinta oo dhan saxay, waa in aad ka saarto marks ka hor Lugood U, videos, Podcast iyo in ka badan. Ka dib markii in, guji "nuqul Lugood".
Markaas, guji "Media" in ay leeg- bidix ee suuqa hoose. Sida aad ka arki, waxaa jira fursado badan. Guji "Music", badhanka ugu horeeyay, in la furo suuqa kala music ah. In uu furmo suuqa music ah, hubi heeso aad rabto in aad dhoofin ka dibna riix "Dhoofinta in". In ay liiska hoos-hoos, dooro "Dhoofinta in Lugood Library".
Haddii aad dhoofiyo qaar ka mid ah heesaha iPod in Lugood hor, waxaad sidoo kale riixi kartaa "Smart dhoofinta in Lugood". Waxay kaa caawinaysaa in aad nuqul music aan ku Lugood, kuwaas oo Orodo dhoofinta music isku celcelis ah.
Fiiro gaar ah: Labada qeybood oo la jaanqaadaan macruufka 5, 6 & 7 Click here si aad u hesho info badan oo ku saabsan daydo iPod taageeray.
Sida aan kor ku soo sheegay, taas qalab iPod in Lugood kala iibsiga awood inaad nuqul ka playlists sidoo. Guji "playlist" tab khaanadda tagay. Markaas, waxaad arki doontaa oo dhan playlists aad iPod ku qoran yihiin. Dooro playlists aad doonayso iyo guji saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in". Dooro "Dhoofinta in Lugood Library" ee liiska hoos-hoos. Markaas, playlist wareejinta bilaabmin. Just aad iPod ku xiran waqtiga oo dhan.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri playlists ka iPod wareejinta maktabadda Lugood in muddo ah.
Dhab ahaantii, tallaabooyinka la mid tahay marka aad dib ilaa ay muujinayso TV, Podcast, Lugood U oo dheeraad ah si ay u Lugood. Waxaad samayn kartaa wareejinta sida tallaabooyinka kor ku xusan.
Iyada oo taageero ka barnaamijkan, iPod inay kala iibsiga Lugood ma aha su'aal in aad. Intaa waxaa dheer, haddii aad ka heli tan oo sawiro aad iPod, waxay kaa caawin karaan inaad dhan sawiro si aad computer gurmad iyo iPhone, iPad iyo iPod kale. Waxad abuuri kartaa albums loo kala saaro sawirada, u sahlan raadinta iyo sidoo.